आज घटस्थापना: जमरा रोप्ने शुभ साइत बति बजे ? - Laltin.com
आज घटस्थापना: जमरा रोप्ने शुभ साइत बति बजे ?
नेपालीको महान् पर्व बडादशैं आजबाट शुरू भएको छ । प्रतेक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म १५ दिन धुमधामका साथ मनाउने गरिन्छ । शक्तिकी अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गाको आह्वान गरी पूजा आरम्भ हुन्छ । दसैँको १५ दिन नै विधिपूर्वक देवी माँ दुर्गाको पूजा आरधना गरिन्छ ।
आज दशैंको पहिलो दिन घरघरमा दियो, कलश र गणेश स्थापनासहित घटस्थापना पूजा गरिन्छ । आज बिहानै नित्यकर्म गरि चोखो भएर नजिकको नदी वा स्थलबाट बालुवा वा माटो ल्याई गाईको गोबरले लिपेर विधिपूर्पक जमरा राखिन्छ।जमरा दुर्गा देवीको प्रिय वस्तु भएकाले विजयादशमीको दिन आज रोपिएको जमरा देवीलाई चढाएर टीका प्रसादसँग ग्रहण गरिन्छ ।
जमरामा जौ,धान,मकै,आदि अन्नहरु उमारिन्छ।जमरालाई समृद्धि र सुस्वास्थ्यको प्रतीक मानिन्छ । जमरालाई आयुर्वेदिक औषधिका रूपमा पनि सेवन गरिन्छ ।
आज घटस्थापनाको साइत बिहान ११ : ४६ बजे रहेको समितिले जनाएको छ । आज दिनभर चित्रा नक्षत्र र वैधृति योग परेकाले घटस्थापनाको साइतअघि चित्रा नक्षत्र र वैधृति योगको शान्ति गर्नुपर्ने समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए ।
विभन्न कामको सिलसिलामा घर बाहिर रहेका परिवारका सदस्यहरु र आफन्तजनहरु घर फर्कने भएकोले दशैंलाई पारिवारिक पुनर्मिलन र मेलमिलापको पर्वका रुपमा पनि लिइन्छ । धेरैजसो शैक्षिक संस्थाहरुले दशैंका अवसरमा आजैदेखि सार्वजनिक बिदा दिने गरेका छन् ।
Previous: नेपालीको महान् पर्व बडादसैँ सुरु, आज घटस्थापना
Next: शक्तिपीठमा बिहानैदेखि भक्तजनको चहलपहल